Ningbo Hilectro Power Technology Co., Ltd bụ isi azụmahịa nke Haitian mbanye, onye na-pụrụ iche na n'ichepụta ihe electric forklift, stacker, odida obodo ụgbọ, golfcart wdg The ụlọ ọrụ na-ana na nkà ihe ọmụma nke Haitian Group "High Ogo, elu arụmọrụ na ume -azọpụta ", na aiming na kpọbata ndị kacha mma na klas na ngwaahịa na ahịa.
The ụlọ ọrụ dị na Industry Mpaghara nke Beilun nke bụ otu n'ime nnukwu ọdụ ụgbọ mmiri na gburugburu ụwa. The ebe nke ụlọ mmepụta ihe na-ekpuchi 110 thous square mita. Onwem na multi mmepụta edoghi onye kwa afọ ike bụ n'elu 10 thous tent nke forklifts, ụlọ ọrụ nwere elu testing center n'otu oge.
Ịchịkọta na ọkachamara nlekọta, ụlọ ọrụ nwere a elu ọgwụgwụ R & D otu. Site na ijikọta na anụ ụlọ na esenidụt ahụmahụ, na otu na-emeziwanye àgwà nke forklifts nọgidere, na-agbalị ka a họọrọ na n'elu suppliers na njem.
Single AC moto drive CPD30KJ